Shirka Gurmadka Abaaraha oo maanta ka furmay muqdisho. – Bulsho News
Shirka Gurmadka Abaaraha oo maanta ka furmay muqdisho.
Muqdisho-KNN-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta Magaalada Muqdisho ka furay Shirweynaha Qaran ee Gurmadka Abaaraha oo diiradda lagu saarayo sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay abaarta ba’an ee dalka ka jirta.
Shirka waxaa ka qeyb galaya madaxweyneyaasha dowald-goboleedyada, Qaar kamid ah Midowga Musharixiinta , siyaasiyiin iyo qeybaha kale duwan ee bulshada sida Ganacsatada, Culimaa’udiinka, Haweenka, Dhallinyarada, Odayaasha dhaqanka iyo bahda waxbarashada.
Ujeedka Shirka ayaa ah sidii shacabka Soomaaliyeed uga qeyb qaadan lahaa gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso.
Madaxda kasoo qeeyb gashay Shirka uu Maanta Furay Ra’iisul wasaare rooble, ayaa halkaasi ka jeedin Doono talooyin ku aadan Sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay.
Gobbolada Iyo degaannada Qaar ee Dalka ayaa haatan waxaa ka jiro abaar saameeyay Nolosha dadka iyo Duunyada, Waxaana Dadka ku dhaqan degaanadda ay abaaruhu Saameeyeen ayaa doowladda ka codsadeen Gurmad Deg,deg ah.